သင်္ကြန်အကြိုနေ့ညပိုင်း ရက်ရက်စက်စက်အသတ်ခံလိုက်ရတဲ့ ၈နှစ်သမီး...! - Thadin
HomeNEWSသင်္ကြန်အကြိုနေ့ညပိုင်း ရက်ရက်စက်စက်အသတ်ခံလိုက်ရတဲ့ ၈နှစ်သမီး…!
April 15, 2019 Kay Kay NEWS Comments Off on သင်္ကြန်အကြိုနေ့ညပိုင်း ရက်ရက်စက်စက်အသတ်ခံလိုက်ရတဲ့ ၈နှစ်သမီး…!
သင်္ကြန်အကြိုနေ့ညပိုင်းက လက်ဝတ်ရတနာများယူဆောင်သွားပြီး သတ်ဖြတ်ခံထားရတဲ့ မိန်းကလေးအလောင်းတွေ့ရှိ . မင်းပြား ဧပြီ ၁၄
မင်းပြားမြိုနယ် သစ်ပုတ်တောင်ကျေးရွာ ဦးစံမောင်သိန်း၏ သမီး အသက် ၈ နှစ် မလှိုင်ဌေးဝင်းသည် ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဧပြီလ ၁၃ ရက်နေ့ ည ၉နာရီ အချိန်တွင် မြစ်ချောင်းကမ်းစပ်နားမှာ သေဆုံးလျှက်တွေ့ရှိခဲ့သည်။
၄င်းအမျိုးသမီးငယ်သည် ည ၇ နာရီအချိန် ရွာတောင်ဖက် တောစပ်သို့တောထိုင်ရန်သွားရာမှ အမည်မသိလူတစုမှ လက်ဝတ်ရတနာများကိုယူပြီး မြစ်ချောင်းကမ်းစပ်နားမှာ ရက်ရက်စက်စက် သတ်ဖြတ်ခဲ့ကြောင်းနှင့် ကျေးရွာရှိလူများမှ ည ၉ နာရီအချိန်၌ ထိုအလောင်းအားရှာဖွေတွေ့ ရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ကနဦးသတင်းရရှိပါသည်။
သင်ျကွနျအကွိုနညေ့ပိုငျးက လကျဝတျရတနာမြားယူဆောငျသှားပွီး သတျဖွတျခံထားရတဲ့ မိနျးကလေးအလောငျးတှရှေိ့ . မငျးပွား ဧပွီ ၁၄
မငျးပွားမွိုနယျ သဈပုတျတောငျကြေးရှာ ဦးစံမောငျသိနျး၏ သမီး အသကျ ၈ နှဈ မလှိုငျဌေးဝငျးသညျ ၂၀၁၉ ခုနှဈ ဧပွီလ ၁၃ ရကျနေ့ ည ၉နာရီ အခြိနျတှငျ မွဈခြောငျးကမျးစပျနားမှာ သဆေုံးလြှကျတှရှေိ့ခဲ့သညျ။
၄ငျးအမြိုးသမီးငယျသညျ ည ၇ နာရီအခြိနျ ရှာတောငျဖကျ တောစပျသို့တောထိုငျရနျသှားရာမှ အမညျမသိလူတစုမှ လကျဝတျရတနာမြားကိုယူပွီး မွဈခြောငျးကမျးစပျနားမှာ ရကျရကျစကျစကျ သတျဖွတျခဲ့ကွောငျးနှငျ့ ကြေးရှာရှိလူမြားမှ ည ၉ နာရီအခြိနျ၌ ထိုအလောငျးအားရှာဖှတှေေ့ ရှိခဲ့ခွငျးဖွဈကွောငျး ကနဦးသတငျးရရှိပါသညျ။
This Month : 34864
Total Users : 535345
Total views : 2420657